Ndị Ikpe 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 16:1-31
16 Otu ụbọchị, Samsịn gara Geza+ wee hụ otu akwụna ma banye n’ụlọ ya.+ 2 E wee kọọrọ ndị Geza, sị: “Samsịn batara ebe a.” Ha wee gbaa ya gburugburu+ ma chebiri ya abalị ahụ dum n’ọnụ ụzọ ámá obodo.+ Ha wee nọrọ jii n’abalị ahụ dum, na-asị: “Ozugbo chi bọrọ, anyị ga-egbu ya.”+ 3 Ma, Samsịn dinaara ala ruo etiti abalị wee bilie n’etiti abalị, jide ibo ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ+ na idé dị n’akụkụ ya abụọ, fopụ ha, tinyere ihe e ji tụchie ya, ma tụkwasị ha n’ubu ya wee buru+ ha gbagoo n’elu ugwu nke chere Hibrọn+ ihu. 4 O wee ruo na mgbe e mesịrị, ọ hụrụ otu nwaanyị n’anya, bụ́ onye bi na ndagwurugwu Sorek, aha ya bụ Delaịla.+ 5 Ndị isi+ ndị Filistia wee bịakwute ya, sị ya: “Ghọgbuo+ ya, mata ebe oké ike ya si nakwa ihe anyị ga-eji mee ka ike anyị ka nke ya nakwa ihe anyị ga-eji kee ya agbụ iji merie ya; onye nke ọ bụla n’ime anyị ga-enye gị otu puku na otu narị mkpụrụ ego ọlaọcha.”+ 6 E mesịa, Delaịla sịrị Samsịn: “Biko, gwa m, olee ebe oké ike gị a dị, gịnịkwa ka a pụrụ iji kee gị agbụ wee merie gị?”+ 7 Samsịn wee sị ya: “Ọ bụrụ na e jiri akwara ndụ+ asaa kee m agbụ, ike ga-agwụ m, m ga-adịkwa ka onye ọ bụla ọzọ.” 8 Ndị isi+ ndị Filistia wee chịtara ya akwara ndụ asaa ndị a na-amịkpọghị amịkpọ. E mesịa, o ji ha kee ya agbụ. 9 Ndị chebiiri ya nọkwa ọdụ n’ime ime ụlọ ya,+ o wee sị ya: “Samsịn, ndị Filistia+ abịala ime gị ihe!” O wee dọbisịa akwara ahụ, dị nnọọ ka owu si adọbi ma a ṅaa ya n’ọkụ.+ A mataghịkwa ebe ike ya dị.+ 10 Delaịla+ wee sị Samsịn: “Lee! I jiriwo m gwurie egwu, i wee na-aghara m ụgha.+ Ugbu a, biko, gwa m ihe a pụrụ iji kee gị agbụ.” 11 O wee sị ya: “Ọ bụrụ na e jiri ụdọ ọhụrụ nke a na-ejibeghị rụọ ọrụ ọ bụla kee m agbụ, ike ga-agwụ m, m ga-adịkwa ka onye ọ bụla ọzọ.” 12 Delaịla wee chịrị ụdọ ọhụrụ kee ya, sị ya: “Samsịn, ndị Filistia abịala ime gị ihe!” N’ime oge a, ndị ahụ chebiiri ya nọ ọdụ n’ime ime ụlọ.+ O wee dọbie ụdọ ahụ e kere ya n’aka dị ka à ga-asị na ọ bụ eriri.+ 13 E mesịa, Delaịla sịrị Samsịn: “Ị ka ji m na-egwuri egwu, i wee na-aghara m ụgha.+ Biko, gwa m ihe a pụrụ iji kee gị agbụ.”+ O wee sị ya: “Ọ bụrụ na i jiri owu e ji akpa ákwà+ kee ntutu isi m nke dị ùkwù asaa.” 14 O wee were osisi e ji ekwe ákwà jikọta ùkwù ntutu isi ya, sị ya: “Samsịn, ndị Filistia abịala ime gị ihe!”+ O wee si n’ụra teta, fopụ osisi ahụ, dọbiekwa owu ahụ e ji akpa ákwà. 15 Delaịla wee sị ya: “Gịnị mere i ji asị, ‘Ahụrụ m gị n’anya,’+ ebe ọ bụ na obi gị adịghị n’ebe m nọ? I jirila m gwurie egwu ugboro atọ a, ị gwabeghịkwa m ebe oké ike gị dị.”+ 16 O wee ruo na, n’ihi nsogbu+ Delaịla nọ na-enye ya site n’okwu ọ na-agwa ya mgbe dum, na-arịọsi ya ike, mkpụrụ obi ya enweghị ike idi ya ma ọlị.+ 17 N’ikpeazụ, ọ gwara ya ihe niile dị ya n’obi+ wee sị ya: “Agụba+ emetụbeghị m n’isi, n’ihi na abụ m onye Naziraịt nke Chineke site n’afọ nne m.+ Ọ bụrụ na a kpụọ m isi, ike m ga-apụ n’ahụ́ m, ike ga-agwụ m, m ga-adịkwa ka onye ọ bụla ọzọ.”+ 18 Mgbe Delaịla hụrụ na ọ gwawo ya ihe niile dị ya n’obi, o zipụrụ ozi ozugbo wee kpọọ ndị isi+ ndị Filistia, sị ha: “Gbagotenụ na nke ugbu a, n’ihi na ọ gwawo m ihe niile dị ya n’obi.”+ Ndị isi ndị Filistia wee gbagote bịakwute ya, ha jikwa ego ha ga-enye ya.+ 19 O wee mee ka ọ rahụ ụra n’ikpere ụkwụ ya. O wee kpọọ otu nwoke ma gwa ya ka ọ kpụpụ ntutu isi ya nke dị úkwù asaa, nwaanyị ahụ wee malite igosi na ya ka ya ike, ike ya wee na-apụ ya n’ahụ́. 20 Delaịla wee sị: “Samsịn, ndị Filistia abịala ime gị ihe!” O wee teta n’ụra, sị: “M ga-apụ dị ka m na-emebu+ wee gbụrụ onwe m.” Ma ọ maghị na ọ bụ Jehova si n’ebe ọ nọ pụọ.+ 21 Ndị Filistia wee jide ya, ghụpụ ya anya abụọ,+ kpọrọ ya gbadaa Geza,+ tụọkwa ya ịgà abụọ e ji ọla kọpa mee;+ o wee ghọọ onye na-egwe nri+ n’ụlọ mkpọrọ.+ 22 N’ime oge a, ntutu isi ya malitere ito nke ọma ozugbo ahụ a kpụrụ ya isi.+ 23 Ndị isi ndị Filistia wee zukọta ịchụrụ Degọn+ bụ́ chi ha nnukwu àjà nakwa ịṅụrị ọṅụ, ha wee na-asị: “Chi anyị enyefewo Samsịn bụ́ onye iro anyị n’aka anyị!”+ 24 Mgbe ndị Filistia hụrụ ya, ha malitere ozugbo ito chi ha,+ ha sịrị, “n’ihi na chi anyị ewerewo onye iro anyị+ na onye na-ebibi ala anyị+ na onye gburu ọtụtụ ndị obodo anyị+ nyefee n’aka anyị.” 25 O wee ruo na n’ihi obi ụtọ ha nwere,+ ha malitere ịsị: “Kpọọnụ Samsịn ka o metụrụ anyị ihe ọchị.”+ Ha wee kpọpụta Samsịn n’ụlọ mkpọrọ ka o mee ihe ga-atọ ha ọchị;+ ha wee mee ka o guzoro n’etiti ogidi abụọ. 26 Samsịn wee gwa nwa okoro sekpụ ya n’aka, sị: “Mee ka m metụ ogidi ndị ji ụlọ a aka, ka m dabere na ha.” 27 (Ma ụlọ ahụ jupụtara ná ndị ikom na ndị inyom, ndị isi niile nke ndị Filistia nọkwa n’ebe ahụ;+ ihe dị ka puku mmadụ atọ ma ndị ikom ma ndị inyom nọkwa n’elu ụlọ ahụ na-ekiri Samsịn, jiri ya na-eme ihe ọchị.)+ 28 Samsịn+ wee kpọkuo Jehova,+ sị: “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, biko, cheta m,+ biko, nye m ike,+ naanị otu ugboro a, gị ezi Chineke, ka m bọọrọ onwe m ọbọ n’ahụ́ ndị Filistia maka otu n’ime anya m abụọ.”+ 29 Samsịn wee jidesie aka ike n’ogidi abụọ ahụ dị n’etiti ụlọ ahụ, bụ́ ndị ji ụlọ ahụ, jigidesie ha aka ike, were aka nri jide otu, were aka ekpe jide nke ọzọ. 30 Samsịn wee sị: “Ka mkpụrụ obi m soro ndị Filistia nwụọ.”+ O wee jiri ike hulata, ụlọ ahụ wee dagide ndị isi ahụ, dagidekwa ndị niile nọ n’ime ya,+ nke mere na ndị o gburu mgbe ọ na-anwụ karịrị ndị o gburu mgbe ọ dị ndụ.+ 31 N’ikpeazụ, ụmụnne ya na ndị ezinụlọ nna ya dum gbadatara wee bulie ya, buru ya laa wee lie ya n’agbata Zora+ na Eshtaọl,+ n’ebe ili ozu nke Manoa+ nna ya. O kpere Izrel ikpe ruo afọ iri abụọ.+
Ndị Ikpe 16